မော်ဒယ်နံပါတ်. 103T90-T စစ်ထုတ်သည် Filterless concept
ပြီးပြီ Black powder coating ရေနံစုဆောင်း အစွန်းခံသံမဏိ
လေစီးကြောင်း 850m3 / h မှုတ်တံ Metal Blower
မော်တာပါဝါ 180W အလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေး Heat Auto-clean
ထိန်းချုပ်မှု 3-Speed Gesture Control ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (W *: D * H ကို) 945*580*505မီလီမီတာ
မီးအိမ် 2x1.5W LED QTY တင်နေသည် (20မိသားစုဆရာဝန် / 40HQ) 106/261pcs
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းရန် ISO9001 နှင့် ISO14001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုကျင့်သုံးသည်.
ငါတို့ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်တဲ့အခါ, သငျသညျခြွင်းချက်စျေးနှုန်းမှာ abosolute အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးလာပြီဖြစ်ကြောင်းစိတ်ချစွာငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ဈေးကွက်ကို ဦး တည်သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်တွင် နေ၍ ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ယူဆသောထုတ်ကုန်များကိုမပြုလုပ်ပါ. တကယ်တော့ငါတို့ပစ်မှတ်စျေးကွက်ကိုသွား, စားသုံးသူများ၏အကြိုက်နှင့်မနှစ်သက်သောအရာကိုကြည့်ပါ. ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအားစျေးကွက်တွင်ဘာကိုလူကြိုက်များကြောင်းနှင့်၎င်းတို့ယှဉ်ပြိုင်မှုတွင်အောင်မြင်မှုရစေသည်.
သင့်တွင်ပြproblemsနာအချို့ရှိပါက 103T90-T ကွေးပုံသဏ္glassာန်ဖန်သားအနက်ရောင်အမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းဖုံးအုပ်အကွာအဝေး 90cm, သို့မဟုတ် T Shape Range Hood အကြောင်းအသေးစိတ်သိလိုပါက,ဒေါင်လိုက် Range hood ကို,အစိုးရအဖွဲ့စီးရီးလက်အောက်တွင်,Tablet Gas Hob စီးရီး,အလွန်ပါးလွှာသော Gas Hob စီးရီး,စသည်တို့. ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ!
108X60 ရှိုစီးရီး Range ပါးပျဉ်း 60cm
106X-A Split ရုပ်သိမ်းခြင်းအကွာအဝေးမြင့်မားသောထုတ်ယူမှုနှုန်းသည်ဆူညံသံနည်းပါးသည်
108X60A ရှိုစီးရီး Range ပါးပျဉ်း 60cm